Xiaomi Smartwatch wuxuu noqon karaa mid dhab ah goor dhow | Androidsis
Waa xaqiiqo muuqata in kaniiniga iyo xumbada smartwatch ay qarxeen waqti hore. In kasta oo kororka bilowga ah ee qalabkani, inyar iyo inyar ayaa lakala rogay ilaa ay ku dhawaadaan in la ilaawo. Xaaladda kiniinnada, maadaama taleefannada leh shaashado sii kordhaya ay suuqa soo gaarayaan, waxtarkooda ayaa su'aal laga keenay. Iyo, marka laga hadlayo saacadaha casriga ah, madax-bannaanidooda hooseysa ayaa miisaan culus ku leh khibrada isticmaalaha. Inkastoo qaar Xiaomi smartwatch si fiican ayey ugu dhaqmaan arrintan.
Iyo, tani waa sababta ugu weyn ee qoyska saacadaha caqliga leh ee ka socda Aasiya ay suuqa u xaaqeen. Ma aha in la xuso qiimaheeda cajiibka ah ee lacagta, halkaas oo aad ka iibsan karto xalal aad u dhameystiran adigoon jeexin jeebkaaga wax badan.
Xiaomi smartwatch ee soo socda ayaa la shaqeyn doona Android WearOS
Illaa iyo hadda, shirkadda Aasiya waxay dooratay nidaam ay ku shaqeyso oo ay nolol ku siiso qoyskeeda Xiaomi smartwatch oo dhameystiran. Laakiin, waxay u muuqataa in shirkadda weyn ee fadhigeedu yahay Beijing ay bedeshay maskaxdeeda ayna bilaabi karto smartwatch cusub oo la shaqeyn doona nidaamka deegaanka ee wearable-yada ay sameysay Google.
Dabcan, iyada oo la tixgelinayo in Xiaomi smartwatches ay si fiican u iibiso, illaa iyo haddana aysan u isticmaalin WearOS mid ka mid ah xallintooda, maxaa beddeli lahaa nidaamka hawlgalka hadda. Waa hagaag suurtagal heshiis cusub oo u dhexeeya Google iyo shirkadda Shiinaha.
Ka taxaddar, waxaan maqalnay warar xan ah oo ku saabsan suurtagalnimada in Google ay soo saarto qalabkeeda casriga ah muddo dheer. Iyo fikradda ah in qaabkani uu soo saaray soo saaraha Aasiya wuxuu umuuqdaa mid runtii nagu soo jiidasho leh. Haa, smartwatch Xiaomi ah, oo ay saxeexday Google, oo leh ismaamul wanaagsan iyo qiimo jaban, ayaa suuqa weyn ka abuuri kara.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Xiaomi » Xiaomi miyuu ku shaqeeyaa qalabkiisa casriga ah ee loo yaqaan 'Wear OS'?
Apple Music waxay kudarsameysaa Muuqaalka Madoow iyo Chromecast ee ku qulqulaya Android